मानवीय अतिक्रमणबाट थलिएको फेवाताल फेरि प्राकृतिक अतिक्रमणमा : जलकुम्भी फाल्ने मेसिन के नाम मात्रै हो ? – POKHARA TOURISM NEWS
HomePokharaमानवीय अतिक्रमणबाट थलिएको फेवाताल फेरि प्राकृतिक अतिक्रमणमा : जलकुम्भी फाल्ने मेसिन के नाम मात्रै हो ?
मानवीय अतिक्रमणबाट थलिएको फेवाताल फेरि प्राकृतिक अतिक्रमणमा : जलकुम्भी फाल्ने मेसिन के नाम मात्रै हो ?
असोज २ पोखरा :
पर्यटकीय राजधानी पोखराको गहना फेवाताल जलकुम्भी झारले ढाकिन थालेको छ । मानवीय अतिक्रमणबाट थलिएको फेवाताल फेरि प्राकृतिक अतिक्रमणमा परेको छ । कहीले मानवीन अतिक्रमण त कहीले प्राकृतिक अतिक्रमण यसले गर्दा फेवाताल दिन प्रतिदिन कुरुप बन्दै गएको छ ।
हिउदमा आफै हराउने र बर्षायाममा तालको सौन्दर्यनै बिगार्ने गरी ढाकिने जलकुम्भीको दिर्घकालिन ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा यस बर्षपनि फेवाताल जलकुम्भीले ढाकिन पुगेको हो । जलकुम्भी झार पोखराकै टाउको दुखाइ बनेको छ । राजनीतिक दलका नेता तथा जुनसुकै उम्मेदवारको एजेन्डामा फेवातालको जलकुम्भी झार बन्ने गरेको हुन्छ । तर, फेवातालमा जलकुम्भी झार समस्या हट्नुको सट्टा फैलिँदै फेवाताल ढाक्दै गएको देखिन्छ । फेवाताल होकी घाँसे मैदान छुट्याउन गारो देखिन्छ । पोखरा घुम्न आएका पर्यटकहरुले फेवाताल त नाम मात्रै रहेछ भनेर औलाएको पाईन्छ ।
यो वर्ष असार–साउनमा धेरै पानी परेन । भदौ अन्तिमदेखि परेका अविरल वर्षाले भने हर्पन खोला हृवात्तै बढ्यो वर्षाले फेवातालको उपल्लो भेगमा भएको जलकुम्भी बगाएर तल्लो भेगतिर ल्यायो । यतिखेर जलकुम्भीले पुरै ताल ढाकेको छ । झारको कारण तालमा डुङ्गा सयरमा समेत समस्या भएको डुङ्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
जलकुम्भी झार ब्यबस्थापनको लागि भन्दै जिल्ला विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाले बर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आउँछन । एनजीओ, आइएनजीओ लगायत विभिन्न संघसंस्थाले जलकुम्भीका लागि भनेर बर्सेनी लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको ५० लाख र पोखरा महानगरपालिकाको ७५ लाख रुपैयाँ गरी १ करोड २५ लाख रुपौयाँमा फेवातालको जलकुम्भी झार निकाल्ने मेसिन दुई वर्षअघि ल्याइएको हो । जलकुम्भीको जालो निकाल्ने मेसिन कता थन्किएर बसेको छ ? खै त फेवाताल सफा ? कतै त्यो मेसिन फेवातालको जालो फाल्ने भनेर पोख्रेलीको आँखामा जालो त लगाएको होइन ? शंका लागेको छ ।
उता फेवाताल संरक्षणको नाममा वर्षेनी करौडौं रुपैयाँ खर्चेको सरकारको दाबी छ । तर, जलकुम्भी र गेग्रानले ताल भरिएको न स्थानीय सरकारले देख्छ, न प्रदेश सरकारले । कसरी होला भ्रमण बर्ष २०२० सफल ।